Zava-pisotro manadio ny havokavoky ny mpifoka sigara
Iaraha-mahalala fa tena sarotra ny miala sigara. Misy singa poizina ho an’ny havokavoka anefa avy amin’ny sigara, izay manimba azy tokoa. Ilaina ny manadio azy matetika, noho izany. Ity misy zava-pisotro afaka manadio ny havokavoky ny mpifoka sigara.
· Tamotamo 2 sf
· Tongolo 400g
· Sirop d’érable 400g (eny amin’ny tranom-barotra lehibe)
· Rano 1
Afangaro amin’ny rano ny « sirop d’érable ». Ampangotrahina avy eo. Etsy an-daniny, tetehina madinika ny sakamalaho sy ny tongolo dia arotsaka ao anatin’ilay rano nomamiana teo. Alefa ao koa ny tamotamo avy eo. Ahena ny afo dia avela hiketrika hatrany ny fangaro, mandrapaharitrany hatreo amin’ny an-tsasany. Tantavanina avy eo dia hafindra ao anaty fitoerana vita amin’ny vera. Avela hangatsiaka amin’ny hafanana ety ivelany, izay vao ampidirina ao anaty vata fampangatsiahana.
Samy mitondra tombony ara-pahasalamana ho an’ny fahasalamana avokoa ireo akora fototra telo mandrafitra ity zava-pisotro ity, dia ny tamotamo, ny sakamalaho ary ny tongolo. Samy manana mpanala arafesina, feno otrikaina ary misy singa miaro amin’ny bakteria sy otrikaretina avokoa izy ireo. Mampiavaka ny sakamalaho manokana dia izy manampy ny havokavoka hamoaka ny rehoka sy loto miandrona ao anatiny, vokatry ny fifohana sigara.